घर अफ्रिकी फुटबल स्टोरीहरू अच्राफ हाकिमी बचपन कहानी प्लस अनटोल्ड बायोग्राफी तथ्यहरू
हाम्रो अचरफ हकीमीको जीवनीले तपाईंलाई उनको बाल्यावस्थाको कथा, प्रारम्भिक जीवन, अभिभावक, परिवार, पत्नी, बच्चा, जीवनशैली, कार, नेट मूल्य र व्यक्तिगत जीवनको बारे तथ्यहरू बताउँछ।
संक्षेपमा भन्नुपर्दा, यो फुटबलरहरूको जीवनयात्राको कहानी हो, बाल्यकालदेखि, जब उनी प्रसिद्ध भए। तपाईको आत्मकथा भूखलाई छेड्न, यहाँ वयस्क ग्यालेरीमा उसको पालना छ - अच्राफ हाकिमीको बायोको एक सारांश।
आच्राफ हकीमीको जीवन कथा।
हो, सबैलाई थाहा छ कि उनी त्यो गतिशील र शक्तिशाली फुल-ब्याक हुन् जो फिफा क्यारियर मोडमा धेरै राम्रो छ। जहाँसम्म, केवल केही हात प्रशंसकहरूले अच्राफ हकिमीको जीवनी पढ्न विचार गर्छन् जुन धेरै रोचक छ। अब थप विज्ञापन बिना, सुरु गरौं।
अच्राफ हकीमीको बाल्यकाल कहानी:
अचृफ हकीमीको बाल्यकालको तस्वीर।
जीवनी सुरु गर्नेहरूको लागि, उहाँ उपनाम लिनुहुन्छ "Arra"। अच्राफ हाकिमी मौह स्पेनको म्याड्रिडमा नोभेम्बर १41998। को चौथो दिनमा जन्म भएको थियो। उहाँ आफ्नी प्यारी आमा र बुबामा जन्मेका तीन बच्चाहरूमध्ये पहिलो हुनुहुन्छ जो एक पटक आय आर्जन गर्थे। के तपाइँ जान्नुहुन्थ्यो कि डिफेन्डर दुबै स्पेनी र मोरक्कनको नागरिक हो? सत्य कुरा के हो भने, अच्राफ हाकिमीका आमा बुबा मोरक्कन आप्रवासीहरू थिए जो स्पेनको जन्म हुनुभन्दा धेरै अघि नै उनीहरू आइपुगेका थिए।
यसैले, अचक्राफले शुद्ध अफ्रिकी परिवारको उत्पत्ति युरोपेली देशमा हुर्केका भए पनि - स्पेनको म्याड्रिडको गेटाफमा। उनले आफ्नो शुरुआती वर्षहरू आफ्नो भाई नबिलसँगै बिताए (जसलाई उहाँ आफ्नो सबैभन्दा मिल्ने साथीको रूपमा आदर गर्नुहुन्छ) र बहिनी विदाद।
अच्राफ हाकिमी- आच्राफको एक तस्वीर उसको भाई नाबिलको साथ म्याड्रिड स्पेनमा भइरहेको छ।
म्याड्रिडको दक्षिणी उपनगरहरूमा गेटाफेमा हुर्किएकी युवा अचाफ एक दमदार बच्चा थिए जसकी आमाले अक्सर उनी एथलेटिक्समा विशेष गरी पौडी खेल्ने हेर्ने इच्छाको बारेमा बोल्थे। यद्यपि, अच्राफलाई फुटबलमा आफ्नो उत्कट चाहना थाँहा थियो। यस्तै, उनी खेल खेल्नदेखि पछि हटेनन जुन उसलाई थाँहा थियो कि कुनै दिन उसले आफ्नो परिवारलाई उनीहरूको आर्थिक अवस्थाबाट उचाल्न सक्छ।
अच्राफ हकीमी परिवार पृष्ठभूमि:
आच्राफ हाकिमीको परिवार मोनीसँग सled्घर्ष गर्दै थिए जब ऊ सानो थियो। आफ्नो गरीब परिवार पृष्ठभूमि को सम्बन्ध मा, आफ्नो बुवा एक सडक विक्रेता थियो जबकि उनकी आमा एक घर सफा गर्ने थियो। यो कुरा थाहा पाइसकेपछि, तपाईंले सायद महसुस गर्नुभएको छ कि अच्राफ हाकिमीका आमा बुबाले आफ्ना छोराको फुटबलि dreams सपनाहरू पूरा गर्न जीविका चलाउन धेरै पैसा कमाउन परिश्रम गरे।
उनीहरूको संघर्षको बदलामा, अच्राफले उनका आमाबुबालाई फुटबलमा उनको सफलताको बारेमा आशा राखेर खुशी बनाए। त्यस्ता सकारात्मक समाचारहरूले उनीहरूलाई कडा परिश्रम गर्न, दिन र रात परिश्रम गर्न बाध्य तुल्यायो। तैपनि, अच्राफ हाकिमीका अभिभावकले अझै पनि खेल खेल्ने किट किन्न सजिलो फुटबल बुटहरू र अन्य किटहरू खेल्नको लागि पैसा जुटाउन सक्षम भएका थिए अछ्राफलाई समर्थन गर्न।
आच्राफ हकीमीको फुटबलको साथ प्रारम्भिक जीवन:
सबैभन्दा पहिले स्थानीय क्लब डेपोर्टिभो कोलोनिया डे ओफिगेवीमा उनको प्रशिक्षण लिनको लागि अचरफको स्वभाव थियो। यो स्थानीय क्लबमा थियो कि युवा अचाफ पहिलो पटक प्रतिस्पर्धी फुटबल मा आफ्नो पहिलो कदम चाले। जब यो जवान थियो, ऊ शैक्षिक शिक्षाको बारेमा कम गम्भीर भयो।
गम्भीरताको उचाई: हेर्नुहोस् कि कसले आफ्नो बाल्यकाल क्लबमा ट्रफी जित्यो र आफ्नो भाइसँग नायकहरूको उत्सव मनायो।
वास्तवमा, उनी एक विद्यार्थी भन्दा फुटबलर थिए। सुरुमा अच्राफका अभिभावकहरूले सुरुमा विकासको अनुमोदन गरेनन् तर उनीहरूले फुटबलमा उद्देश्य पत्ता लगाएको कुरालाई मिलान गरे धेरै समय नबित्दै उनीहरूले खेलकुदलाई उपद्रव बन्नु भन्दा उनीहरूले खेलकुद गर्न रुचाउँथे।
अच्राफ हकीमीको वास्तविक म्याड्रिड बर्ष:
स्थानीय क्लब डेपोर्टिभो कोलोनिया डि ओफिगेवीमा उनको प्रशिक्षणको चरम सीमामा, अच्राफ एक प्रतिस्पर्धी फुटबलर बने जसको प्रतिभा रियल मैड्रिडको स्काउटको उच्च स्वादबाट बच्न सकेन।
त्यस तरीकाले, एक year बर्षे अछ्राफलाई रियल म्याड्रिड एकेडेमीमा ल्याइएको थियो जहाँ उनले क्लबको बेन्जामिन सेटअपको साथ प्रशिक्षण शुरू गरे उमेर उमेर पुग्नुभन्दा पहिले उनी क्लबको ला फेब्रिका युवा प्रणालीमा भर्ना भए।
के तपाई अच्राफलाई रियल म्याड्रिड एकेडेमीमा आफ्नो समयको आनन्द लिई भेट्न सक्नुहुन्छ?
अच्राफ हकीमीको जीवनी- प्रख्यात कथाको मार्ग:
युवा प्रणालीमा छँदा, अच्राफले श्रेणीमा उठेको सिमलेस र उनको सीप सेट उत्कृष्ट थियो। बढी के? उनीसँग क्लबको वरिष्ठ टोलीमा पदोन्नति गर्नका लागि सही पात्र थियो।
पदोन्नती वर्ष २०१ in मा आयो र तुरुन्तै अच्राफको लस ब्लान्कोस मुख्य टोलीमा ब्याकअपको रूपमा बढेको थियो डेन कार्वावल र नाचो फर्नार्जियन अगस्त 2017 मा।
रियाल म्याड्रिडका वरिष्ठ टोलीमा, अचक्राफ भविष्यको उत्साहले देख्न सक्थे र उनीलाई पहिलो टीम बनाउने आशा के थियो भनेर थाहा थियो।
अच्राफ हकीमीको जीवनी- फेम टु फेम स्टोरी:
नम्बर १ j को जर्सी लगाएर, अचक्राफले प्रभावकारी रूपमा आफ्नो एकीकरण र रियल मैड्रिडको पहिलो टीमसँग परिचित गरे। वास्तवमा, उसले २०१ side/२०१ season को मौसममा ला लिगा खेलहरूमा उसको पक्षको लागि दुई पटक नेटको फिर्ता भेट्टायो।
बढी के? उनले २०१–-१– यूईएफए च्याम्पियन लिग प्रतियोगितामा दुई पटक प्रदर्शन गरे जुन रियल म्याड्रिडले लगातार तेस्रो पटक उपाधि जितेका थिए। विकासको साथ, अच्राफ चैम्पियन्स लिग जित्ने पहिलो मोरक्कन खेलाडी भए। बाँकी, तिनीहरू भन्छन्, इतिहास हो।
ट्रफी जित्नुहोस् र देशको साथ पहिचान गर्नुहोस्। आच्राफले त्यसो गरे।
अच्राफ हकीमीको प्रेमिका, पत्नी र बच्चाहरू:
आच्राफ हाकिमीको प्रेम जीवनमा सर्दै, उनकी प्रेमिका लुसिया उत्रेरा भलेन्जुएलासँग डिफेन्डरको रोमान्टिक संलग्नतामा सार्वजनिक चासो २०१ 2017 मा शुरू भयो जब उनले वास्तविक मैड्रिडको पहिलो टीमको लागि खेल्ने मौका पाए। यद्यपि lovebirds प्रशंसकहरु लाई एक उत्तम जोडीको रूपमा प्रहार गर्‍यो, तिनीहरू कहिले पनि पति र पत्नी बन्ने थिएनन्।
आच्राफ २०१í-२०१í को बीचमा लुका भालेन्जुएलाको प्रेममा थिए।
2018 मा, अच्राफ हाकिमीले 'संसारको सबैभन्दा सुन्दर अभिनेत्री' हिबा अबौकलाई डेट गर्न शुरू गरे जो उनीभन्दा १२ बर्ष जेठो छ। डिफेन्डर उनको रोमान्टिक जन्मदिनको शुभकामना पठाएर आफ्नो नयाँ प्रेमिका हिबा अबौक प्रकट गर्न सोशल मिडियामा गए। हिबा एक स्पेनिश अभिनेत्री हुन् जसले कथित रूपमा उनको मुटुको स्ट्रब भन्दा १२ बर्ष बढी जेठो छिन। कसलाई मतलब!! उमेर मात्र संख्या हो।
अछाफ र हिबा दुबै एक अज्ञात वर्ष र मितिमा एक निजी विवाह समारोहमा सँगै थिए। तर हामी पक्का जान्दछौं कि कुन मिति अछ्राफ हाकिमीकी श्रीमतीले उनका पहिलो छोरालाई जन्माईन्। यो फेब्रुअरी २०२० को १२ औं दिनमा थियो।
आच्राफ हाकिमीको श्रीमतीलाई चिन्ने- यो मोरक्कन इन्टरनेसनलको उनकी श्रीमती हिबा अबाउट र छोरासँगको एक राम्रो फोटो हो।
अच्राफ हाकिमीको पारिवारिक जीवन:
त्यहाँ धेरै फुटबल प्रतिभाहरू छन् जसले आफ्ना आमाबुबा र परिवारको बलिदान प्रयासहरूमा फुटबलमा उनीहरूको सफलताको .णी छन्। हाम्रो आफ्नै फुटबल खेल ती मध्ये एक हो। यो खण्डमा हामी तपाईको उनको अचाफ हाकिमीका परिवारका सदस्यहरुको बारेमा उसका आमाबुवासँग शुरू हुने थप तथ्यहरु लिएर आउनेछौं।
अच्राफ हकीमीका बुबा र आमाको बारेमा:
डिफेन्डर अभिभावकको नाम अझै अज्ञात छ। तिनीहरू मोरक्कनको परिवारको जरा राख्दछन् र कथित रूपमा तिनीहरू २० बर्ष भन्दा माथिको हुँदा मोरक्कन आप्रवासीको रूपमा स्पेनमा आए। मोरक्कोमा आच्राफ बुबाको घर शहर ओउड जेममा छ जबकि उनकी आमा उही देशको कसार अल-कबीरकी हो।
अच्राफ हकीमीका अभिभावकहरूमा अधिक- त्यहाँ केही केहि खेलाडीहरू छन् जसले उनीहरूका आमा बुबालाई छुट्टीमा लिएर उनीहरूको कदर गर्दछन्। आच्राफ ती मध्ये एक हो।
आच्राफ हकीमीका अभिभावकलाई उनको शुरुवाती जीवनमा उनका छोराको फुटबल प्रयासमा विश्वास भएकोमा श्रेय दिइन्छ। तिनीहरूले उसलाई आफ्नो सफलता सुनिश्चित गर्न सबै चीज दिए। नतिजाको रूपमा, डिफेन्डरले आफ्नो बुबा र आमाको भावी प्रतिबद्धतालाई कदर गर्न खेल्छ कि उनीहरूले कम आय आर्जन गर्नेहरू थिए जसले क्रमशः सडक विक्रेता र घर सफा गर्ने काम गरे।
अच्राफ हकीमीका भाई बहिनीहरू र आफन्तहरूका बारे:
हिस्पैनिक-मोरक्कनका दुई भाई बहिनीहरू छन्। तीनिहरुमा उनको जस्तो देखिने भाई नाबिल साथै लुक-अलिके बहिनी विदाद सामेल छन्। दुबै भाइबहिनीहरूको बारेमा धेरै जान्दैनन् जसले दुवैलाई आफ्नो सेलिब्रेटी भाईलाई प्रेम गर्छन् र समर्थन गर्छन्। डिफेन्डरको विस्तारित पारिवारिक जीवन र पुर्खाहरूको बारेमा, उहाँकी आमा र बुवा हजुरबा हजुरआमाको बारेमा धेरै जान्नुहुन्न जबकि उनका काका, बुआ, भतिजा र भतिजीहरू अझै यो जीवनी लेख्दा चिन्न सकेका छैनन्।
अच्राफ हकीमीका दाजुभाइ- के तपाईंले आफ्नी बहिनी र दाइको साथ आराफका यी दुर्लभ तस्बिरहरू देख्नुभयो?
अच्राफ हकीमी निजी जीवन:
आच्राफ «अर्रा» हकीमी को हो? - इन्टरको राक्षसी प्रतिभा। कुन कुराले फुटबलरलाई टिक बनाउँछ र उसको अफ-पिच व्यक्तित्व कस्तो प्रकृतिको हुन्छ? यो एक अवसरको अवसर हो स्ट्राइकरको व्यक्तित्वको बारेमा तथ्यहरू हेर्नको लागि तपाईलाई उसको पूर्ण तस्वीर प्राप्त गर्न सहयोग पुर्‍याउन। सुरु गर्नका लागि, अच्राफ व्यक्तित्वले व्यक्तित्वको लक्षण झल्काउँछ जसको राशि चिन्ह वृश्चिक हो।
उहाँ भावुक, सहज, महत्वाकांक्षी हुनुहुन्छ र आफ्नो व्यक्तिगत र निजी जीवनको बारेमा तथ्य खुलाउन खुला हुनुहुन्छ। डिफेन्डरको रुचि र शौकमा संगीत सुन्नु, यात्रा, बक्सिंग र आफ्नो परिवार र साथीहरूसँग राम्रो समय बिताउनु समावेश छ।
के तपाई अचाराफले गर्ने संगीतको मजा लिनुहुन्छ?
आच्राफ हकीमी जीवनशैली:
आच्राफ काकिमी खर्च गर्ने बानी र पैसा कमाउने प्रयासहरूको कुरा गर्नुहोस्, ऊ तल्लो उडान फुटबल खेल्नको लागि तलब र ज्यालामा धेरै राम्रो कमाउँछ भने अनुमोदन भनेको उसको अनुमानित २ मिलियन डलर बराबरको योगदान हो।
नतिजाको रूपमा, डिफेन्डरको विलासी जीवनशैलीले प्रशंसकहरूलाई आश्चर्यचकित पार्दैन विशेष गरी जब उनीहरूले उनलाई विदेशी कारहरूमा सवारी गरेको भेट्छन् वा अन्ततः ऊ बस्ने घर वा अपार्टमेन्टको मूल्यको बारेमा थाहा पाउँछन्।
अच्राफ हाकिमी: उनीसँग एक अडी छन आफ्नो कार स collection्ग्रहमा।
अच्राफ हकीमी तथ्य:
हाम्रो अचाफ हाकिमीको बाल्यकाल कहानी र जीवनी समाप्त गर्नका लागि, यहाँ डिफेन्डरको बारेमा थोरै ज्ञात वा अनकही तथ्यहरू छन्।
वास्तवमा #1: तलब ब्रेकडाउन:
डार्टमन्डको साथ उनको आगमन पछि, धेरै प्रशंसकहरूले प्रश्न सोधेका छन्; अचाफ हकीमीले कति कमाउँछ?…। जर्मन क्लबको लागि हस्ताक्षर गरेपछि, फुटबलरको सम्झौतामा उसले पूरै तलब जेबमा देखेको थियो १. 1.5 मिलियन यूरो प्रति वर्ष। अच्राफ हकीमीको तल प्रति बर्ष, महिना, दिन, घण्टा, मिनेट र सेकेन्ड (मार्च २०२० को रूपमा) को तलब छ।
यूरोमा अच्राफ हकीमीको तलब (€)
पाउंड (£) मा अच्राफ हकीमीको तलब
प्रति वर्ष आय € 1,500,000 £ 1,300,000
प्रति महिना आय € 125,000 £ 108,333.3
प्रति हप्ता आय € 28,846.15 £ 25,000
प्रति दिन आय € 4,109.59 £ 3,561.64
प्रति घण्टा आय € 171.23 £ 148.40
प्रति मिनेट आय € 2.85 £ 2.47
प्रति सेकेन्ड कमाई € 0.05 £ 0.04
जब देखि तपाइँ हेर्न शुरू गर्नुभयो अक्राफ हकीमीबायो, यो उसले कमाएको हो।
तपाईंलाई थाँहा थियो?… स्पेनमा औसत व्यक्तिले कम्तिमा .7.4..XNUMX वर्ष कमाउन काम गर्नु पर्छ € 144,833, जुन मार्टिन ब्रेथवेट १ महिनामा कमाउँछ।
तथ्य # २- फिफा रेटिंग्स:
डिफेन्डरको फेब्रुअरी २०२० मा समग्र 81१ को रेटिंग छ। उच्च नभए पनि, रेटिंगले बोरोसिया डार्टमन्डको loanणमा पनि माथि उडान फुटबलमा कत्ति राम्रो देखिन्छ भन्ने कुरा राख्छ जहाँ उनले लेखेको समयमा आफ्नो व्यापारलाई थाँती राख्छन्।
उसको रेटिंग्स माथि र बढेको छ। छवि क्रेडिट: SoFIFA।
तथ्य # 3- ट्याटूहरू:
यो बायो लेख्ने बखत अच्राफको कुनै ट्याटू वा बडी आर्ट छैन। यसको साटो, ऊ आफ्नो pac फिट, ११ इन्चको उचाई संग राम्ररी जाने six वटा प्याकहरू चलाउन उत्सुक देखिन्छ।
तपाईंले कुनै ट्याटू भेट्नुभयो? हामीलाई टिप्पणी बाकसमा थाहा दिनुहोस्? छवि क्रेडिट: इन्स्टाग्राम।
तथ्य # 4- धर्म:
उसको रूप र नामको आधारमा तपाईं सजिलैसँग अनुमान लगाउन सक्नुहुनेछ कि अच्राफ हकीमीका परिवारका सदस्यहरू मुसलमान हुन सक्छन्। त्यहाँ डिफेन्डर अभ्यास गर्ने मुस्लिम हो भन्ने तथ्यलाई इन्कार गर्न सकिदैन। धर्म उनको नाम हाकिमीको नाममा प्रस्ट हुन्छ। अरु के?… उनको विवाह एक श्रीमतीसँग भएको छ जसले मुस्लिम संस्कृतिमा डिग्री हासिल गर्छिन् र उनी इन्स्टाग्राममा मुसलमानको 'रमजान मुबारक' चाहान्छन्।
आच्राफले आफ्नो इन्स्टाग्राम ह्याण्डलमा यस्तो फोटो पोष्ट गर्नु अनौंठो होइन। छवि क्रेडिट: इन्स्टाग्राम।
तथ्य # Smoking धूम्रपान र मदिरा:
उसको इस्लामिक मान्यताको लागि धन्यवाद, हाकिमीले कडा पेय पदार्थ सेवन गर्ने विचारहरू संग बकबक गरेनन्। यद्यपि धूम्रपान सम्बन्धी उनको धारणाको बारेमा धेरै थाहा छैन तर हामीलाई थाहा छ कि उनले स्वास्थ्य र स्वास्थ्यको लागि सम्झौता गर्न सक्षम कुनै पनि काम गर्दैनन्।
तथ्य # at- उपलब्धि २१ मा:
२१ वर्षको हुँदा, अचाफ हाकिमीले imi व्यक्तिगत र क्लब सम्मान आफ्नो नाममा लिएका छन्। तल चित्रण गरिएको, यस तथ्यले प्रमाणित गर्दछ कि ऊ विश्व फुटबलमा सब भन्दा राम्रो युवा प्रतिभा हो, सायद भविष्यमा सम्भव हुने संसार। तिम्रो के बिचार छ?…
अच्राफ हाकिमी तथ्य- २१ मा उनका उपलब्धिहरू। क्रेडिट: बुन्डेशलिगा
तथ्य जाँच गर्नुहोस्: हाम्रो अच्राफ हाकिमी बचपन कहानी प्लस अनटोल्ड बायोग्राफी तथ्या reading्कहरू पढ्नका लागि धन्यबाद। मा LifeBogger, हामी सटीकता र निष्पक्षताका लागि प्रयास गर्दछौं। यदि तपाइँले केहि राम्रो देख्नुहुन्न भने, कृपया तल टिप्पणी गरेर हामीलाई साझेदारी गर्नुहोस्। हामी तपाईका विचारहरुलाई सँधै मूल्य दिन्छौं र सम्मान गर्छौं।
अच्राफ हकीमीको जीवनी तथ्य (विकी ईन्क्वायरीज)
पुरा नाम: अच्राफ हाकिमी मौह
जन्म मिति र स्थान: November नोभेम्बर १41998 - - म्याड्रिड, स्पेन
अभिभावक: श्री र श्रीमती हकिमी
Siblings: Ouidad (बहिनी), नाबिल (भाई)
प्रेमिका: हिबा अबुक
बच्चाहरु: एक छोरा (Achraf Jnr)
पारिवारिक मूल: मोरक्को
प्रारम्भिक जीवन फुटबलको साथ (क्लबहरू) ओफिगेवी र रियल म्याड्रिड
उमेर र उचाई २१ (मार्च २०२० को रूपमा) र १.21१ मीटर (f फिट ११ इन्च)
राशिफल: वृश्चिक (संसाधन, साहसी, भावुक, जिद्दी, एक साँचो साथी)
व्यवसाय: फुटबलर (डिफेन्डर / विger्गर)
परिमार्जित मिति: अप्रिल २ 2, २०२०